Tsy afaka miandry isika hamahana ity krizy ity
Honko sy karbaona manga
Mpitarika manerantany amin'ny Blue Carbon izahay
Tsy rivotra mafana fotsiny ny asantsika momba ny fiovan'ny toetr'andro. Natombokay ny iray amin'ireo tetikasa fiarovana honko karbaona manga voamarina voalohany indrindra eran'izao tontolo izao tamin'ny taona 2019. Nitarika ny hetsika karbaona manga izay mametraka ny vondrom-piarahamonina ho lohalaharana, mampandroso ny siansa, mamokatra fitaovana sy fomba fiasa vaovao, ary mizara ny zavatra hitanay mba hahafahan'ny rehetra mahita. tombontsoa.
Manomboka eto Madagasikara ka hatrany Indonezia, dia manohana ireo vondrom-piarahamonina amorontsiraka izahay mba hitantana ny toeram-ponenany karbaona manga sy ny jono ao anatin'ny rafitra iray mirindra. Ny fomba fiasantsika dia mametraka ny fe-potoana azo antoka, ny fitantanana mifototra amin'ny siansa ary ny fampiharana ny fiaraha-miasa matanjaka ilaina amin'ny famerenana sy ny fitahirizana ny toeram-ponenan'ny karbaona manga eo amin'ny fiarahamonina.
Manombana ny karbaona manga nalaina tamin'ny fanaraha-maso siantifika izahay. Mamolavola fomba fiasa mitombina kokoa izahay mba hahazoana antoka fa manohana ny fiarovana ny fiarahamonina ny famatsiam-bola momba ny toetrandro. Manohana ireo vondrom-piarahamonina mpanjono nentim-paharazana izahay mba hanohitra ny fahasimban'ny toetrandro amin'ny fomba mahomby sy haingana indrindra.